While Zimbabwe has increased its healthcare budget for 2021, it remains too little to support the country's healthcare system, which is struggling amid the ongoing Covid-19 pandemic as well as economic weakness, hyper-inflation and other humanitarian issues. Zimbabwe is supported by the IMF and other organisations; however, the combination of Zimbabwe's own healthcare spending plans and additional financial packages of support remains inadequate to significantly improve the country's healthcare provision. In recognition of longstanding problems impeding pharmaceutical production, which will remain in place over the course of our forecast period, Zimbabwe's government is working towards increasing local pharmaceutical production, with plans to work with local universities to produce medicines and other essential drugs to tackle corruption and price distortions when importing drugs. While this would provide investment opportunities in the future, doing business in the country will remain difficult.
The Zimbabwe Pharmaceuticals & Healthcare Report features Fitch Solutions' forecasts for drugs and healthcare expenditure and imports and exports, focusing on the growth outlook for the prescription, OTC, patented drugs and generics market segments.
Fitch Solutions' Zimbabwe Pharmaceuticals & Healthcare Report provides industry professionals, strategists, company executives, investors, analysts and sales/marketing heads with independent forecasts and competitive intelligence on the Algeria pharmaceutical and healthcare industry.